डा. डीआरको नयाँ गीत ‘राखिदिए जिन्दगीको हरेक…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)::Milap News
डा. डीआरको नयाँ गीत ‘राखिदिए जिन्दगीको हरेक…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘राखिदिए जिन्दगीको हरेक स्वास तिम्रै लागि…’ सार्वजनिक भएको छ । नेपाल आइडलकी अस्मिता अधिकारी र सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर, सागरकै सङ्गीत, चन्द्र चौधरीको मिक्सिङ र प्रकाश मिश्रको माष्टरिङ रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
प्रहिल कार्कीले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा अञ्जिता, कविता, प्रहिल र सन्दिपलाई फिचरिङ गरिएको छ । रोसिकले छायाँकन गरेको भिडियोलाई माधव बेल्वासेले सम्पादन गरेका हुन् ।